MANKALAZA NY FAHA HERINTAONA NIJOROANY
Izay tia mahafoy’, io no teny filamatry ny fikambanana TFA na Tanoran’ny Faritra Ankazotokana, izay mivondrona eny anivon’ny Katedraly Katolika Andohalo.
Niforona ny 08 Aogositra 2010 ity fikambanana tanora ity, izay tarihan’ny Filohany , Andrianjakamandimby Laza. Ireo tanora mipetraka eny amin’ny Faritra Ankazotokana no mandrafitra izany fikambanana izany. Amin’ny ankapobeny dia ny hanatanteraka ny asam-panompoana sy fanampiana ny fiangonana no tena imasoan’ireto tanoran’ny TFA ireto. Tafiditra ao anatin’izany ny fameloma-maso sy fandraisana an-tanana ny andraikitr’ireo tompon’andraikitra nisahana ny APV na Ankohnam-Piangonana Velona teo aloha, izay eny anivon’ny Faritra. Eo ihany koa ny fanadiovana ny trano Fiangonana….
Samy mitondra ny anjara birikiny sy izay mendrika indrindra ao aminy avy ny mpikambana tsirairay na ara-pitaovana izany na ara-kevitra. Izany no natao dia mba hanatsarana sy hanampiana ny fiangonana. Anisan’ny andraikitra sahanin’ny TFA ihany koa ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana ny samy mpikambana.
Maro ny ezaka efa vitan’ny fikambanana TFA nandritra izay herintaona nijoroany izay. Ankoatra ny lesona momba ny fiainana sy ny finoana ary ny fampianarana ny hira ara-pilazantsara izay efa fanao mahazatra ny fikambanana dia nisy, ihany koa, ny ezaka lehibe izay efa vitan’izy ireo tao anatin’izay taona voalohany nijoroany izay. Anisan’ireny ny fanolorana fampianarana maimaimpona mikasika ny fanaovana mofomamy ho an’ny mpikambana ary koa ny fampianarana mamily fiarakodia. Izany rehetra izany no natao dia mba hampivelatra ireo tanora mpikambana tsirairay. Mbola maro ireo vinavina izay heverin’ny fikambanana hatao mikasika izany.
Fa hanamarihana ny tsingerin-taona voalohany niforonan’ny TFA dia hisy ny Sorona Masina lehibe izay hotanterahana ny Alahady 14 Aogositra izao eny amin’ny Katedraly Andohalo, manomboka amin’ny 7 ora maraina. Izany fanompoam-pivavahana izany dia ho tarihan’ny Ray am-panahy Razanadrakoto. Manentana ireo mpino sy ireo kristianina rehetra mba ho tonga maro amin’io fotoan-dehibe io fa sady hery no fanohanana ireto tanora ao amin’ny TFA ireto izany.
Hisy, ihany koa valan-dresaka arahana adihevitra sy fifaninanan-kira ara-pilazantsara izay hifaninanan’ireo tanora avy eny anivon’ny Faritra tsirairay ao amin’ny Fiangonana, hoentina hanamarihana io tsingerin-taona voalohan’ny TFA io.
Ireo tanora mpikambana ao amin'ny TFA Katedraly Andohalo
(Sary : TFA)